Deskreen inoshandura chero skrini kuva yechipiri | Linux Vakapindwa muropa
Makore apfuura, pandakatanga kunyora, ndinorangarira ndiine komputa yedesktop yakabatana neiyo PlayStation skrini yandaishandisa sekondari kune, semuenzaniso, kunyora ndichipa chiitiko. Kunyangwe iyo skrini yemidziyo yedu yakakura, imwe yekuwedzera inogona kuuya inobatsira, uye nekuda kweichi chikonzero makambani senge Apple akaunza yavo Sidecar chinguva chakapfuura uye macOS inotevera ichaenderera mberi. Kana izvo zvatinoda kungo "kukudza" chidzitiro chemidziyo yedu, deskgreen Icho chishandiso chinoshamisa, kunyanya kana iwe uchichiedza uye uchiziva zvinhu zvishoma.
Deskreen iri "FOSS", ndiko kuti, yemahara uye yakavhurwa sosi. Pane imwe chete yaiswa, kunyangwe muLinux tinokwanisa kushandisa iyo AppImage, zvese zvatinofanirwa kuita kubatanidza iyo skrini kune imwechete network pane huru komputa uye yekubatanidza, chimwe chinhu chisina kuoma zvachose. Kana tangobatana, tinogona kuona mune yechipiri kuratidza iyo desktop yese kana application imwechete.
1 Deskreen yemahara, yemahara uye yakavhurwa sosi
2 Inowanikwa yeLinux, macOS, uye Windows
Deskreen yemahara, yemahara uye yakavhurwa sosi
Kuti ubatanidze zvinoratidzwa, ingoita zvinotevera:
Isu tinovhura Deskreen.
Kana isu tine smart kifaa chine kamera, tinogona kuverenga iyo QR kodhi inoonekwa pachiratidziri. Kana pasina kamera iripo, tinogona kuteedzera kero yaunopa kune chero browser.
Kana tangobatana, tinodzvanya pa "Rega".
Ipapo isu tinosarudza kana tichida iyo yakazara skrini kuti iratidzwe kana kungova hwindo.
Kana isu tikasarudza hwindo, ikozvino isu tinofanirwa kusarudza imwe yeapplication yatavhura.
Kana tangosarudza izvo zvatinoda kuratidza, tinobaya pane «Simbisa».
Rutsigiro rwechishandiso runotoshamisika, ndiko kuti, kwatinogona kurushandisa. Inoshanda pane zvishandiso senge iyo iPhone, uye zvakare pane akangwara maTV ne webOS, kunyangwe iko kuzorodzwa mune ino inoshanda system isiri yakanyanya kunaka.
Iko kunyorera kunotanga muChirungu, asi kunoshandurwa muchiSpanish uye isu tinogona kusarudza mutauro wedu kubva pane sarudzo giya. Kubva pachikamu chimwe chete isu tinogona zvakare kusarudza iyo yerima theme. Uye kana kugovana chidzitiro nenzira iri nyore uye inokurumidza inoita kunge diki, zvinofanirwawo kutaurwa kuti Deskreen tsigira akawanda maratidziro uye girazi windows akasiyana. Izvo zvaisingatsigire, zvirinani mumiedzo yangu, ndiyo inonzwika, asi izvo hazvifanirwe kunge zvichinetsa kana chinangwa chedu chiri chekubudirira mune redu basa. Semuenzaniso, ndakaiyedza kuti ndione pahwendefa rangu zvandainyora muAtomu munguva chaiyo kuti ndisazopatsanura skrini ye laptop yangu, uye zvese zvinoshanda zvakakwana.
Inowanikwa yeLinux, macOS, uye Windows
Deskreen iri inowanikwa yeWindows, macOS uye Linux kubva ku peji rekuvandudza. Vashandisi veLinux vanogona kudhawunirodha iyo AppImage, saka hazvitombofanirwe kuisa chero chinhu kuti ugone kunakidzwa nezvose izvo chishandiso ichi chingatipe. Iyo zvakare inowanikwa seDEB package (Debian / Ubuntu) uye Arch Linux vashandisi vanayo muAUR.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Deskreen inoshandura chero skrini kuva yechipiri uye inoshanda zvakakwana paLinux ine zero zvinetso